အစိမ်းရောင် စစ်ကားကြီးပေါ်က လူလိမ်များ – Tameelay
အစိမ်းရောင် စစ်ကားကြီးပေါ်က လူလိမ်များ
အစိမ်းရောင် စစ်ကားကြီးတွေဘီးမလှိမ့်ခင်မိသားစုကို နုတ်ဆက်ကြတော့
အချို့ကပြောတယ် -အမေ ကျမ်းမာရေးကို ဂရုစိုက်
သားအတွက် ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ နောက်တန်းပြန်ဝင်ရင် အမေလိုချင်တဲ့
သေချာဂရုစိုက် မိန်းမ . ဒီတစ်ခါ ယောကျာ်း နောက်တန်းပြန်ရင်
ဒီတစ်ခေါက် စစ်ဆင်ရေးက နည်းနည်းကြာမယ်ပြောတယ် သဲ
ရှေ့တန်းမှာ ရတဲ့လစာလေးစုပြီးရင် နောက်တန်းပြန်အဝင်
တွယ်တာစရာ သံယောဇဉ်မရှိသူလူပျိုစစ်သည် တချို့ကျ စစနောက်နောက်
နဲ့ပြောကြတယ်-ဂျီးဒေါ် ဒီကောင် ခင်ဗျား မုန့်ဟင်းခါး အကြွေးမပေးရသေးဘူးမှ
လားဒီကောင် သေရင် ရမဲ့ကူငွေထဲကဖြတ်ယူလိုက်တဲ့….
တချို့ကသူတို့အဘ RSM ကြီးကိုလှမ်းစတယ်ဗိုလ်လေး ပြန်လာရင် သမီးလာ
လမ်းထိတ်က ငါကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးကိုဖွင့်ပြောတော့မယ်ကွာ တဲ့
မတည်နိုင်တဲ့ ကတိရိုးသားတဲ့မုသားအပြစ်မဲ့ လိမ်လည်မှုတွေ ရေပက်မဝင်
​ပြောလို့သူတို့ ကားကြီး စတင်ထွက်ခွာသွားတယ်။
အမေအိုက သားမောင်ဘေးကင်းစေ​ကြောင်းဆုတောင်းရင်း နံ့သာဖြူပုတီး
ကိုရင်လောင်း ကလေးငယ်နဲ့ ရဟန်းအမလောင်း ဇနီးသည်က
မိန်းမပျိုက စစ်ထွက်တဲ့ ချစ်သူအပြန်သပြေပန်းနဲ့ လက်ကမ်းကြိုရန်
လမ်းထိပ် မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်က ဂျီးဒေါ်ကတော့သူ့ဖောက်သည် ရဲဘော်လေး
” ငါ့ နိုင်ငံတော် ငါ့ နိုင်ငံသားငါ့ တပ်မတော်အတွက်
ငါ၏အသက်ကို စွန့်လွှတ်ရန်အဓိဌာန်ပြုပါ သည်” ဆိုတဲ့ စကားရပ်နောက်တချို့က နောက်မလှည့်
စတမ်းနဲ့သူတို့ချစ်တဲ့ နိုင်ငံအတွက် ပေးဆပ်သွားကြတော့-
အမေအိုရဲ့ နံ့သာဖြူပုတီးလေးလည်း ကတိမတည်တဲ့သားမောင်ကြောင့်
ရဟန်းလောင်း ခလေးငယ်လည်းမိခင်လက်ကိုဆွဲ စစ်ကြောင်းတွေတွေ့
မိန်းမပျိုကတော့ မုသားပြောသွားတဲ့ ချစ်သူအတွက် ပူဆွေးနေခဲ့ရတယ် ။
လမ်းထိတ်က မုန်းဟင်းခါးဆိုင်လေးလည်းဝယ်သူမရှိ တိတ်ဆိတ်နေရင်းးးး။
အရာခံဗိုလ်ကြီးက ယောကျာ်းရင့်မာစစ်သားကြီးဖြစ်ပါလျှက် လူမမြင်အောင်
“လူလိမ်တွေ မင်းတို့ ကတိမတည်ကြဘူးတပည့်တို့ ရာ” တဲ့လေ ။
အစိမျးရောငျ စဈကားကွီးတှဘေီးမလှိမျ့ခငျမိသားစုကို နုတျဆကျကွတော့
အခြို့ကပွောတယျ -အမေ ကမျြးမာရေးကို ဂရုစိုကျ
သားအတှကျ ဘာမှစိတျမပူနဲ့ နောကျတနျးပွနျဝငျရငျ အမလေိုခငျြတဲ့
သခြောဂရုစိုကျ မိနျးမ . ဒီတဈခါ ယောကျြား နောကျတနျးပွနျရငျ
ဒီတဈခေါကျ စဈဆငျရေးက နညျးနညျးကွာမယျပွောတယျ သဲ
ရှတေ့နျးမှာ ရတဲ့လစာလေးစုပွီးရငျ နောကျတနျးပွနျအဝငျ
တှယျတာစရာ သံယောဇဉျမရှိသူလူပြိုစဈသညျ တခြို့ကြ စစနောကျနောကျ
နဲ့ပွောကွတယျ-ဂြီးဒျေါ ဒီကောငျ ခငျဗြား မုနျ့ဟငျးခါး အကွှေးမပေးရသေးဘူးမှ
လားဒီကောငျ သရေငျ ရမဲ့ကူငှထေဲကဖွတျယူလိုကျတဲ့….
တခြို့ကသူတို့အဘ RSM ကွီးကိုလှမျးစတယျဗိုလျလေး ပွနျလာရငျ သမီးလာ
လမျးထိတျက ငါကွိုကျနတေဲ့ကောငျမလေးကိုဖှငျ့ပွောတော့မယျကှာ တဲ့
မတညျနိုငျတဲ့ ကတိရိုးသားတဲ့မုသားအပွဈမဲ့ လိမျလညျမှုတှေ ရပေကျမဝငျ
​ပွောလို့သူတို့ ကားကွီး စတငျထှကျခှာသှားတယျ။
အမအေိုက သားမောငျဘေးကငျးစေ​ကွောငျးဆုတောငျးရငျး နံ့သာဖွူပုတီး
ကိုရငျလောငျး ကလေးငယျနဲ့ ရဟနျးအမလောငျး ဇနီးသညျက
မိနျးမပြိုက စဈထှကျတဲ့ ခဈြသူအပွနျသပွပေနျးနဲ့ လကျကမျးကွိုရနျ
လမျးထိပျ မုနျ့ဟငျးခါးဆိုငျက ဂြီးဒျေါကတော့သူ့ဖောကျသညျ ရဲဘျောလေး
” ငါ့ နိုငျငံတျော ငါ့ နိုငျငံသားငါ့ တပျမတျောအတှကျ
ငါ၏အသကျကို စှနျ့လှတျရနျအဓိဌာနျပွုပါ သညျ” ဆိုတဲ့ စကားရပျနောကျတခြို့က နောကျမလှညျ့
စတမျးနဲ့သူတို့ခဈြတဲ့ နိုငျငံအတှကျ ပေးဆပျသှားကွတော့-
အမအေိုရဲ့ နံ့သာဖွူပုတီးလေးလညျး ကတိမတညျတဲ့သားမောငျကွောငျ့
ရဟနျးလောငျး ခလေးငယျလညျးမိခငျလကျကိုဆှဲ စဈကွောငျးတှတှေေ့
မိနျးမပြိုကတော့ မုသားပွောသှားတဲ့ ခဈြသူအတှကျ ပူဆှေးနခေဲ့ရတယျ ။
လမျးထိတျက မုနျးဟငျးခါးဆိုငျလေးလညျးဝယျသူမရှိ တိတျဆိတျနရေငျး။
အရာခံဗိုလျကွီးက ယောကြာျးရငျ့မာစဈသားကွီးဖွဈပါလြှကျ လူမမွငျအောငျ
“လူလိမျတှေ မငျးတို့ ကတိမတညျကွဘူးတပညျ့တို့ ရာ” တဲ့လေ ။
ကျီးပေါင်းရောဂါအတွက် ဆေးနည်းများ… ပေါက်ပန်းဖြူ တစ်ခက် ကျီးပေါင်းအတွက် ကျီးပေါင်းအတွက် ပေါက်ပန်းဖြူ ကျီးပေါင်းတက်သာကိုကုသပေးတဲ့ ပေါက်ပန်းဖြူ အဲ့လောက်ပွင့်တယ် နေကြိုက်ရေကြိုက်မို့ ရေဘုံဘိုင်ဘေးမှာစိုက်ထားတယ်အပွင့်ကို ပြုတ်တို့စားရင် ကျီးပေါင်းတက်လို့ ဖြစ်တဲ့ လည်ပင်းအရိုး အဆစ်နာကို ထူးခြားစွာ ပြောက်လို့ရှယ်လိုက်ပါတယ် ထိုင်းမှာစာသင်တုန်းက လည်ပင်းကျီးပေါင်းတက်သာရခဲ့ပါတယ်ထိုင်းဆေးရုံနဲ့ အမေရိကန်ဆရာဝန် ကုသာတောင်မသက်သာဖူး လည်ပင်းအရိုးဆစ်ထဲမှာ အာရုံကြောညှပ့်နေသာဆိုပြီးရလဒ်ပြတယ်အရမ်းကိုခံစားခဲ့ရတယ် …
မြန်မာတို့နှင့်အတိတ်_နိမိတ်_တဘောင်များအကြောင်း *ရှေးယခင်ကတည်းက မြန်မာတို့ဟာ အတိတ် နိမိတ်ကို ယုံကြည်တဲ့ လူမျိုးများဖြစ်ပါတယ်။ ခုချိန်ထိတိုင်အောင်လည်း ယုံကြည်ကြ သူများရှိပါသေးတယ်။ အတိတ် ဆိုသည်မှာ ဖြစ်ခဲ့၊ ဖြစ်ဆဲသော အခြင်းအရာတို့ဟာ နောက် တစ်ချိန်တွင် တစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖြစ်ပါတယ်။ နိမိတ် ဆိုတာကတော့ နောက်ဖြစ်လာမယ့် အကြောင်းကို …
ယောက်ျားတွေထဲမှာ အလွယ်လိုက်၊ အချောင်ခိုပြီး မိန်းမတစ်ယောက်ဆီက ခြူစားတတ်တဲ့ ယောက်ျားပိုင်းလုံးတွေရှိပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာ အရှက်လည်းမရှိသလို၊ ဘာမဆိုလုပ်ရဲကိုင်ရဲကြတဲ့သူတွေပါ။ တော်ကီလည်း အရမ်းကြွယ်ပြီး အရမ်းလည်းချုပ်တတ်တာကြောင့် ယုံစားမိဖို့အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ ဒီလိုယောက်ျားမျိုးကို ရှောင်ရှားနိုင်စေဖို့အတွက် သူတိုရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) သင်ပဲပိုက်ဆံထုတ်နေရတယ် သင်တို့နှစ်ယောက်ချိန်းတွေ့တဲ့အခါ၊ လျှောက်လည်တဲ့ အခါတွေမှာ သူ့ဘက်က ဘယ်တော့မှ …